Enid Blyton. Reissu na esemokwu? | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Akwụkwọ ndị ntorobịa
Ihe ederede a adighi ugbu a n'ihi na Issulọ akwụkwọ ochie nke Enid Blyton abanyela n'ụlọ ahịa maka nwa oge. Nke mbu buru mbido akwukwo abuo nke ulo akwukwo ndi ama ama nke otutu umuaka dika m: Lolọ Malory y Santa Clara. Mgbe ahụ mbipụta ọhụrụ nke nchịkọta ndị a yana ndị nke Ise.
Ana m edebe ihe dị ka akwụkwọ anọ ma ọ bụ ise nke IseOtu n'ime ha dị na foto ahụ, enwere m obi ụtọ na afọ ole na ole gara aga ha nyere m mpịakọta abụọ ahụ m kwuru. Akwụsịrị m ha n'otu oge ọkọchị, gbaba n'ime afọ iri anọ m. N'oge ahụ enwere okwu banyere mmegharị nke akụkụ ihe odide ya na oge ọhụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke oge a. Ndị mbụ mere ha bụ ndị Britain, n'ezie. Mana ọ teghị aka m gụrụ Akụkọ a. Na agbanyeghị ...
Ana m agbalịrị ịdị na-echegbu onwe m na ntakịrị ihe (okwu gbasara ụkpụrụ na ụfọdụ hives nke m na-ata ahụhụ) mgbe m hụrụ okwu "ziri ezi" na "ndọrọ ndọrọ ọchịchị" n'otu ahịrịokwu ahụ. Ọ bụrụ na, na mgbakwunye, mgbazi ahụ bụ asụsụ, pịnye "ihe ngwọta ụlọ", urticaria na-eduga m na nrịanrịa nke ogo dị iche iche. Ya mere M na-akpachara anya tupu ụdị ọ bụla nke pirouette ma ọ bụ asụsụ etemeete na m bụ.
Agụrụ m Blyton - ma ọ bụ Tintin comics (nke tụkwara nke ya obere oge gara aga) - mgbe anyị ezighi ezi na asụsụ abụghị usoro ndọrọ ndọrọ ọchịchị dị ka ọ dị ugbu a. Agụrụ m ya dịka nwagbọghọ n’afọ iri asaa na asatọ, si n'obodo La Mancha na ụlọ akwụkwọ ndị nọn. Na La Mancha anyị bụ ndị nkịtị, dị ka ụjọ ahụ.
Akwụkwọ nke anọ na usoro Santa Clara
Ya mere, na afọ itoolu, iri ma ọ bụ iri na otu, ọ ga-abụ na mmadụ na-agụ akwụkwọ na-enweghị ụzọ ọzọ karịa iji oge (ma ọ bụ) oge dị mma na ịgụ ya. Na Enwere m oge kachasị mma na achịcha gingerbread, njem mgbede, na lacrosse na otu puku na otu ọgbaghara, ihe ọjọ na aghụghọ nke ụmụada bekee nke Santa Clara na Torres de Malory mere ibe ha. Ezochiri m n’ime ọgba niile ma nyochaa ihe omimi niile nke Kirrin na-eso Jorge, ụmụ nwanne nna ya na nkịta ha bụ Tim na ihe omume ha.
Aga m agbakwunye ya Mụ na William Brown nke Richmal Crompton sokwa, ọzọ dịkọrọ ndụ British Blyton. Enwetara m akwụkwọ ya nke sitere na nna m ma ọ masịrị m. Ha mechara nyekwuo m. Echere m na ugbu a Guillermo Brown bụ nwa na-ezighi ezi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị enwere ike.
Ka o sina dị, nke bụ eziokwu bụ na mmadụ na-aka nka, na-agụ ihe ma mụta na misogyny ma ọ bụ ịkpa ókè agbụrụ jupụtara n'akwụkwọ Blyton. E wezuga ya, odide akwukwo ya adighi ajuju ma obu ya mere ejiri were ya ka onye ode akwukwo nke abua. A mụrụ ya na narị afọ nke iri na itoolu na Great Britain nke alaeze na obodo ndị ọzọ na ebe a. Ọ nwụrụ na 60s, ezigbo pụọ na uche na ọhụụ ọhụrụ nke echiche ndị dị ugbu a.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, arụmụka ebighi ebi nke metụtara onye edemede ọ bụla nwere, ka anyị kwuo, ụfọdụ ntụpọ na faịlụ ya na-aga n'ihu. Stylezọ ahụ na ụzọ ịkọ akụkọ dị iche iche n'uche ụmụntakịrị na ndị ntorobịa ka anyị gụrụ ya mgbe ahụ? Enwere m ike ịza onwe m: enweghị echiche. You nwere ike ime ya n'amaghị ama? Ikekwe, mana ọ dị m ka ọ bụghị dị ka ndị na-agụ akwụkwọ, kama dị ka ndị mmadụ, anyị bụ ngwaahịa nke ihe anyị gụrụ, bi ma na-edebe na-abụghị agụmakwụkwọ na gburugburu anyị.
Fọdụ n'ime akwụkwọ m site na nwata na mmalite
Agụkwara m akwụkwọ ndị ahụ Blyton dere ha ka na-ere ahịa, n’ihi na eluigwe na ala ya na otú e si kee ha nwere usoro. Ọdịdị ya bụ kpochapụwo na isi ya agbanwebeghị, ọ bụ ezie na ọ na e mere ihe ụfọdụ na-akpọ «mmegharị», ndị ọzọ «kwachaa» na ndị ọzọ «mmachi». Nanị m na-ajụ onwe m ajụjụ ndị a:
Na m nwere obi ụtọ na akụkọ ha? Obi abụọ adịghị ya. Kedu ihe nwere ike imeziwanye ọgụgụ ihe m? Ọzọkwa. Na enwere m nsogbu nke nghọtahie ma ọ bụ echiche atụgharịrị? Ee e mba. Na m chọpụtara n'oge na-adịbeghị anya adịghị ike ndị edemede na nke onwe onye nke onye edemede a? Ma obu.
M na-agụ akụkọ nke Uzo, na Andersen ma ọ bụ ndị nke Mụnna na-adịghị mma, na site na nhichapụ dịka ihe na-akpụ akpụ. Otu ezigbo ihe atụ: nne m, onye nkụzi ụlọ akwụkwọ praịmarị, n'oge nri ehihie ga-etinye na kaseti redio na kaseti ndị ahụ dị egwu nke akụkọ ihe nkiri dị. Otu n'ime ha bụ Agba agba Bluesite na Perrault. Ihe ngosi a bu ihe egwu, ya na ndi egwu di egwu na egwu di egwu. Taa, m ga-enye ihe ọ bụla iji chọta ya ọzọ.
Mana m na-atụ ya egwu. Anaghị m eche na, n'oge a na fim m, m ga-aghọ psychopath ma ọ bụ onye na-a alcoụ mmanya na-egbu egbu (Inspektọ Oghere, mgbe niile nke ya ...) n'ihi na m nwere mmasị na ụdị ojii. N'ihi ya, m ji okwu dị mfe mechie: gburugburu nke a gha etinye ihe nile. Ndụ adịla ndụ anya nke ọma n'asụsụ, eziokwu na onyonyo. Ihe dị mkpa bụ ịgụ ihe, ihe obula na ihe obula, mana gua.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Akwụkwọ ndị ntorobịa » Enid Blyton. Reissu na esemokwu?
Agụkwara m The Five na Santa Clara, ọ bụkwa eziokwu na ịgụ taa, ha nwere ike gwerie n'otu akụkụ ma ọ bụ ọzọ, dịka taa anyị na-atụ ụjọ na e mere ndị na-akpa ọchị nke anụ ọhịa na-esonyere onye ojii nwere nsogbu nkọwa ( M na-ekwu banyere Eustaquio Morcillón), ma ọ bụ na Captain Thunder gburu Moors, ma ọ bụ na Tom Sawyer, ha bịara oji dị ka ndị ohu. Ma nke ahụ? Enweghi ike igbanwe akuko, na ezigbo akwukwo, ma o bu ihe uto, agaghi akwusi idi n'ihi na egwu nke ihe ojoo, o gosiputara mmekorita mmadu nke oge edere ya Maka m, ha ekwesịghị imetụ aka. Ọ bụrụ na, dịka nwanne nne m, ahụrụ m na ụfọdụ ụmụ nwanne m nwanyị gụrụ mkpa nlekọta, a bịara m ịgwa ha «Prima, Secunda, Tertia ... ọ bụrụgodi na ị hụrụ nke a na egwuregwu a / akwụkwọ akụkọ a / ihe nkiri a ha na-eme ụdị otu ihe, echekwala banyere ya ka ị mee ya maka nke a, maka nke a na maka nke ahụ. Na njikere.
(Na mụ na Guillermo adịghị achị ọchị obere nwa nwoke ... huu ihe nwatakiri, ajọ ifufe nke Caribbean n'akụkụ ya, ọ ga-abụ ikuku ikuku).
Zaghachi Dita Delapluma.
M ka na-echeta “sandwiches ahụ” nke Iri were maka nri. Ego ole m nwere ike iji maa mma m, n'echiche Spanish m, na sandwiches ahụ ...
Sandwiches ndị ahụ dị ụtọ. Oh gosh, ọ bụ eziokwu. Sandwiches. Ndị ntụgharị asụsụ ahụ enwetabeghị na "sanwichi."
D KA DITA OTU narị narị abụọ
kpam kpam na-ekweta, M bụkwa onye ofufe nke ise, na-akwado nke Jules Verne. Ejiri "asụsụ" dị iche iche "amata m".
I chetarala m oge dị ezigbo mma n'oge m bụ nwata, adị m 35.
Ha bụ akwụkwọ nwanne mama m nwere nke na-ewe m afọ iri.
Otu ajụjụ, akwụkwọ akụkọ a n'ụdị ị maara nke ọma, bụ nke nwa agbọghọ nwere nkpuchi na obere mkpuchi? Enwere m ya n'uche m, na nyocha ole na ole m na-eme, ihe niile mana ọ pụtara m.
Zaghachi Christian Perez
Fantomette ma ọ bụrụ na m na-ezighị ezi 😛
Daalụ, João. N'ezie, isiokwu ahụ na-adọrọ mmasị.
Kpamkpam kwenye, Mariola. Naanị m na-echeta otu ihe site na mgbe m gụrụ Ise, na ọkachasị m Hollister m hụrụ n'anya site n'aka Andrew E. Svenson: na enwere m obi ụtọ dị ka dwarf nakwa na ibe ndị ahụ emeghewo otu puku ụzọ nye onye toro eto m na-agụ n'otu oge ahụ ha na-eke. ntọala.
Kedu ka m si amasị ntinye gị, o meela ka m nwee mmụọ ọfụma. Daalụ.
Daalụ. Obi dị gị ụtọ ịme gị ọhụụ, lysergic, ike ma ọ bụ ihe omimi. Gịnị ka m ga-agwa gị nke ị na-amabeghị?
Maazị Rubio dijo
Kemgbe m bụ nwata, agụwo m akwụkwọ ndị a onye ode akwụkwọ kwuru, n'ihi eziokwu ahụ bụ na nwanne m nwanyị nke tọrọ m riri ha ma gbaa m ume ịgụ ha. Enweela m Santa Clara, Malory, the Five, na Puck n'aka m.
Asụsụ Mmekọahụ na Los Cinco? Ana dị nnọọ "nwanyị" n'echiche oge gboo ma eleghị anya ọ bụ ihere, mana Jorgina (Jorge, nwute) bụ onye ọzọ, ụmụ nwanne nna ya kwanyeere ma nwee ekele maka "ọpụpụ" Ndị mụrụ ya amachaghị àgwà dị mkpa nke Jorge, mana e gosipụtara ha dị ka ndị dị otú ahụ. N'ezie, enweghị amamihe nke Ana jọgburu onwe ya, na-agba ya ume ka ọ bụrụ onye nwere obi ike na obi ike.
Kwunye kwa na m agụchaala Malory; ị nwere ike ịse anwụrụ akwụkwọ ọbụla na erughị otu awa, nke bụ eziokwu bụ na ha dị mkpụmkpụ. Enwere m ike ịsị na achọpụtabeghị m otu ahịrịokwu na-eme mkpọtụ. Aremụ agbọghọ na-agba ume ka ha mara ihe, nwee obi ike ma nwee ntụkwasị obi, wezuga ụdị ọdịnala.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị m ka ànyị na-eji akwụkwọ sịga.
Zaghachi M. Rubio
Nnukwu ihe ị na-eme. Ma ọbụghị na anyị nwere mmetụta ahụ, ọ bụ na anyị jiri akwụkwọ sịga were ya ruo ogologo oge.
Ọbụghị naanị site n'ịgụ ihe ndị a na-akpọ ndị gboo anyị na-etolite njirisi edemede anyị.
Obi dị m ụtọ maka ebere gị na nke onye na-agụ na-esonụ na-enyekwa m njikọ ahụ. Obi tọrọ gị ụtọ na ị maghị ruo ókè. Eji m obi m kelee gị na ị nyeghachitere m otu mpempe oge m bụ nwata pụtara ọtụtụ ihe nye m. Enweghị m ike ịmalite ụbọchị karịa. Ma site ebe a na-akpọ gị òkù ka ị bịa n'ihe ọ bụla ọ chọrọ maka nnukwu nkọwa a. Daalụ ekele dịrị gị daalụ
Nke a bụ egwu Blue Beard m.
Aga m ahụ ma m ga-ahụ ọzọ.
Luis, daalụ nke ukwuu. M na-ezo aka azịza m nyere Daniel na mbụ. Obi di m uto nke ukwuu ma egela m ya nti ugboro abuo. Dị oke ọnụ ahịa njem a n'oge ...
Akwụkwọ nke kpaliri ndị ogbu mmadụ atọ ma "mechaa" ndụ Lennon